Umnqweno ke kukuzalwa, nokufa, ukuzala,
Kodwa emva kobomi obuninzi, xa ingqondo sele yoyisile umnqweno,
Umnqweno wasimahla, ukwazi ngokwakho, umntu ovukileyo uya kuthi:
Ndazalwa esibelekweni sakho sokufa kunye nobumnyama,
Vol. 2 NOVEMBA, 1905. 2
Kuwo onke amandla athe ingqondo yomntu kufuneka alwe nayo, umnqweno ngowona woyikisayo, ukhohlisayo, uyingozi, kwaye uyimfuneko.
Xa ingqondo iqala ukwenzeka ukuba ibe ngumzimba iyothusa kwaye iphendulwa yiminqweno yomnqweno, kodwa ngokunxulumana nenxaxheko iba nomtsalane, de ingqondo ide ithi-ke igqwetheke, de yabakhohlwa. Umngcipheko kukuba ngokulangazelela kwengqondo ingqondo idibane nomnqweno ixesha elide kunokuba kufanelekile, okanye unokukhetha ukuzazisa, kwaye ke ubuyele ebumnyameni nakumnqweno. Kuyimfuneko ukuba umnqweno unikezele ekuchaseni kwengqondo, ukuba ngokubona ngokukhohlisa ingqondo iya kuzazi.
Umnqweno ngamandla okulala kwingqondo yendalo iphela. Ngokuhamba kokuqala kwengqondo yendalo iphela, umnqweno uvusele emsebenzini iintsholongwane zazo zonke izinto ezikhoyo. Xa uchukunyiswe ngumoya wengqondo umnqweno uvuswa kwimeko yayo yangoku kwaye ujikeleze kwaye ujikeleze zonke izinto.
Umnqweno yimfama kunye nesithulu. Alunakungcamla, okanye kunuka, okanye ukuchukumisa. Nangona umnqweno ungenazo iimvakalelo, ukanti usebenzisa amandla okusebenza ukuze uzilungiselele. Nangona ingaboni, ifikelela kweliso, itsala kwaye inqwenele imibala kunye neefom. Nangona isisithulu, imamela kwaye isela ngaphakathi endlebeni izandi ezivuselela imvakalelo. Ngaphandle kokungcamla, ilambile, kwaye iyazonwabisa kululwimi. Ngaphandle kwemphunga, ukanti ngeempumlo inuka ivumba elinyusa umdla.
Umnqweno ukho kuzo zonke izinto ezikhoyo, kodwa ufike ekubonakalisweni okugcweleyo nangokugqibeleleyo kuphela ngokwendlela yezilwanyana eziphilayo. Kwaye umnqweno unokudityaniswa kuphela, ulungiswe, kwaye ujongiswe ekusebenziseni ngaphezulu kwesilwanyana ngelixa ikwisimo sayo semvelo kwinyama yezilwanyana.
Umnqweno yinto engekhoyo engakhubekiyo ebangela ukuza rhoqo komphefumlo. Umnqweno yinkqantosi enokutsala bonke ubomi ngokwakho. Ngaphandle kwefom, umnqweno ungena kwaye utye zonke iifom ngokutshintsha kweemeko zakhona eziguqukayo. Umnqweno yi-octopus enzulu ehleli ngaphakathi kumalungu esini; Iintsika zayo zifikelela kwiindlela zokuvalelwa kulwandle lobomi kwaye zikhonze kwimfuno yayo engaze yanelise; into ebonakalayo, evuthayo, umlilo, ivutha kukudla kwayo neenkanuko zayo, iphambanise iinkanuko zayo kunye neenkanuko, ngokuzingca kwecala le-vampire ikhupha amandla omzimba lowo ulambele indlala yakhe, ishiye ubuntu butshisiwe. ngaphandle kwesivalo seluthuli lwehlabathi. Umnqweno yimikhosi engaboniyo esebenzayo, engaguqukiyo, eyonakalisayo, kwaye ingukufa kubo bonke abangahlali bukhona bayo, bayiguqulele ulwazi, kwaye bayidlulisele ekubeni yintando. Umnqweno yinto evula yonke ingcinga malunga nayo kwaye iyinyanzela ukuba ibonelele ngeengoma ezintsha zomdaniso weemvakalelo, iifom ezintsha kunye nezinto ezizisiweyo, uyilo olutsha kunye nemfuno yokwanelisa iminqweno kunye stupefy kwengqondo, kunye namabhongo amatsha okucoca ubuntu kunye ne-pander kwi-egotism yayo. Umnqweno yinambuzane ekhula isuke, itye ngaphakathi, kwaye ityebe engqondweni; ukungena kuyo yonke imisebenzi yayo iphose ubungangamsha malunga nayo kwaye yabangela ukuba ingqondo icinge ngayo njengengalinganiyo okanye iyichaze nge-iteslf.
Kodwa umnqweno ngamandla abangela ukuba indalo ivelise kwakhona kwaye ivelise zonke izinto. Ngaphandle komnqweno wesini bayala ukutshata kwaye baphinde bavelise uhlobo lwabo, kwaye umphefumlo kunye nengqondo azisenakuzala kwakhona; Ngaphandle kweminqweno zonke iifom ziya kuphulukana namandla azo omzimba abonakalayo, ziyakhubeka zibe luthuli kwaye ziqhekeke kumoya omncinci, kwaye ubomi kunye nengcinga azinakubakho zoyilo apho kunokucacisa kwaye kukhale kwaye kutshintshe; ngaphandle komnqweno wobomi awunakuphendula kumphefumlo kwaye ukhule kwaye ukhule, kwaye ukungabinayo impahla yokusebenza ecingelwa ukuba kungamisa umsebenzi wayo, kuya kuyeka ukwenza into kwaye kushiye nengqondo ingenanto. Ngaphandle komnqweno wokuphefumla wawungenakubangela ukuba kubonakale, indalo kunye neenkwenkwezi ziya kuncibilika kwaye zibuyele kwinto yokuqala, kwaye nengqondo ibingazifumananga ukuba yayiyeyokwayo ngaphambi kokuchithwa ngokubanzi.
Ingqondo inobuwedwa kodwa umnqweno awunayo. Ingqondo kunye nomnqweno zivela entanjeni kunye nakwinto enye, kodwa ingqondo yexesha elinye lokuzivelela ngaphambi komnqweno. Ngenxa yokuba umnqweno unxulumene nengqondo unamandla okutsala, okuphembelela kunye nokukhohlisa ingqondo kwinkolelo yokuba ziyafana. Ingqondo ayinakukwenza ngaphandle komnqweno, kwaye ayinako ukwenza ngaphandle kwengqondo. Umnqweno awunakubulawa yingqondo, kodwa ingqondo inokuphakamisa umnqweno ukusuka kwiindlela eziphantsi ukuya eziphezulu. Umnqweno awunakuqhubela phambili ngaphandle koncedo lwengqondo, kodwa ingqondo ayinakuze izazi ngaphandle kokuvavanywa ngumnqweno. Kungumsebenzi wengqondo ukuphakamisa kunye nokwenza ukuthanda umntu, kodwa ngenxa yokuba umnqweno ungazi kwaye ungaboni, ukukhohlisa kwawo kubamba ingqondo ibanjwa kude kube yilapho ingqondo ibonayo ngokukhohlisa kwaye yomelele ngokwaneleyo ukumelana nokunikezela umnqweno. Ngolu lwazi ingqondo ayiziboneli kuphela ukuba yahlukile kwaye ngenxa yokuba ikhululwe kukungazi komnqweno wesilwanyana, kodwa iya kuqalisa isilwanyana kwinkqubo yokuqiqa kwaye ke iyasikhuphula kubumnyama bayo iye kungena kwindiza yomntu.
Umnqweno linqanaba kwinqanaba lokuhamba kwento njengoko iphefumlelwe ebomini kwaye ikhula ngohlobo oluphezulu lwesini, apho kufikelelwe kulo umnqweno. Ngokucinga kunokuba ukwahlukana nokudlula ngaphaya kwesilwanyana, ukudibanisa kunye nomphefumlo wobuntu, ukwenza ngengqondo ngamandla kaThixo wentando kwaye ke ekugqibeleni ibe kukuQaphela okukodwa.